တရုတ်ပြုပြင်ရေးမီးဖိုထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | Dongfang
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ Steam Reformer သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏ဓါတ်ပေါင်းဖိုဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကိရိယာများ၏အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်။ 2. ဒီရေနွေးငွေ့ပြုပြင်ခြင်းမီးဖိုသည်၎င်း၏ပြင်းထန်သော endothermic တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်မြင့်မားသောအပူချိန်၏အထူးပြင်ပအပူ tubular ဓာတ်ပေါင်းဖိုဖြစ်ပါသည်, အပူမီးဖို၏အမျိုးအစားဖွဲ့စည်းပုံတစ်မျိုးအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၃။ ဓာတ်ကူပစ္စည်းအားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပြွန်များနှင့်ဓါတ်ပြုရန်ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှတဆင့်တုံ့ပြန်သည့်မီဒီယာများမှတိုက်ရိုက်အပူပေးသည်။ ၄ ။
၁။ Steam Reformer သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်တွင်အသွင်ပြောင်းလုပ်ဆောင်မှုရှိသည့်ဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်ပစ္စည်းများ၏အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်။
2. ဒီရေနွေးငွေ့ပြုပြင်ခြင်းမီးဖိုသည်၎င်း၏ပြင်းထန်သော endothermic တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်မြင့်မားသောအပူချိန်၏အထူးပြင်ပအပူ tubular ဓာတ်ပေါင်းဖိုဖြစ်ပါသည်, အပူမီးဖို၏အမျိုးအစားဖွဲ့စည်းပုံတစ်မျိုးအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၄။ ဤရေနွေးငွေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုအခြားအပူပြုပြင်ခြင်းမီးဖိုများနှင့်ခွဲခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများအားမီးဖိုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြွန်ပစ္စည်း၊ ပိုက်စနစ်တိုးချဲ့ခြင်း၊ လျော်ကြေး၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
300,000t / y ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ခြင်းမီးဖို
1 သန်း t / y ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ခြင်းမီးဖို
1.2 သန်း t / y ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ခြင်းမီးဖို
1.4 သန်း t / y ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ခြင်းမီးဖို
နောက်တစ်ခု: Incinerator အရည်ကျိုမီးဖို
ရေ ၊ သံထည်လုပ်ငန်း ၊ အပူပေး ၊ Rail Transit ၊ Block ကိုလျှော့ချ ၊ မီးရထားတိုင်ပင်ခြင်း ၊